Guam Tourism: What is next? | Breaking Travel News
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany Guam: Inona ny manaraka?
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Guam • Other • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia
Fizahan-tany Guam: Inona ny manaraka?
Herintaona lasa izay dia niroborobo ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany any amin'ny Teritori Amerikanina any amin'ny Oseana Pasifika Andrefana.
Ny tompon'andraikitra ao amin'ny Birao mpitsidika an'i Guam (GVB) tamin'ny alakamisy dia naneho ny fahatokisany bebe kokoa momba ny fisokafan'ny fizahan-tany tany am-piandohan'ny 2021 izay nisondrotra ny valanaretina COVID-19, ary koa nampitandrina ny amin'ny $ 579 tapitrisa eo ho eo amin'ny fatiantoka fidiram-bolan'ny fizahan-tany noho ny indostrian'ny rongony.
Ny GVB, hoy izy, dia nijanona nifanaraka tamin'ny ahiahiny momba ny fiatraikany eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany rongony sy ny endrik'i Guam ho toy ny fianakaviana aleha.
Tamin'ny fivorian'ny birao GVB ny alakamisy dia nanome antsipiriany sy antontan'isa momba ny fiantraikan'ny rongony fialamboly amin'ny fizahan-tany ny tompon'andraikitra.
Ny fihenan'ny toekarena ao Guam dia vokatry ny fahaverezan'ny asa tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina noho ny areti-mandringana, indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Rehefa nitombo ny tsy an'asa tamin'ny volana martsa, ny ankamaroan'ny fahaverezan'ny asa dia ny fandroahana vonjimaika, saingy manomboka miova izany.
Sivy volana taorian'ny nandravan'ilay valanaretina COVID-19 ny lavitry ny toekarena Guam, nijanona ny toekarena nampanantenaina taloha, namela olona an'arivony tsy niasa ary nandrahona ny handroaka olona an'arivony maro hafa - indrindra ireo vehivavy sy mpifindra monina - hiala ny mpiasa tanteraka.
Ny Departemantan'ny asa any Guam dia nitatitra fa nitombo hatramin'ny 17.3% ny tahan'ny tsy an'asa tamin'ny volana Jona 2020, raha 4.6% izany tamin'ny taona teo.
Tamin'ny famelabelarany dia nilaza i Perez fa tokony hamoy ny 35% eo amin'ny tsenan'ny fizahan-tany Japon sy Taiwan ary 40% amin'ny tsena Koreana i Guam amin'ny fanombohan'ny indostrian'ny rongony fialam-boly.
Ho very 100% amin'ny fitsangatsanganana an-tsekoly any Japon, Korea ary Taiwan koa i Guam, hoy izy.
Ho very koa ny "tsena volafotsy", na zokiolona, ​​miala avy any Japon sy Taiwan amin'ny 50%, ary Korea amin'ny 100%.
Ho very 5% ihany koa i Guam amin'ireo sokajin-taona mpizahatany tsy dia saro-pady - ireo avy amin'ny 25 ka hatramin'ny 49 taona, hoy i Perez nanampy.
Samy Perez sy mpikambana ao amin'ny birao GVB Therese Arriola, izay mpikambana ao amin'ny CCB ihany koa dia nilaza fa ny GVB dia "nanamora" fotsiny ny tatitra momba ny fiatraikany ara-toekarena teo amin'ny indostrian'ny rongony lehibe izay nanirahan'ny CCB. Tatitra CCB izany, hoy izy ireo.
Ny tatitra momba ny fiatraikany ara-toekarena takiana, hoy izy ireo, dia tsy nanisa afa-tsy ny tombotsoan'ny fametrahana indostria vaovao ary tsy nijery ny vokany teo amin'ny fizahan-tany.
Ny fandinihana, natao talohan'ny areti-mandringana COVID-19, dia namina $ 133 tapitrisa dolara isan-taona tamin'ny varotra rongony raha vao niasa tanteraka ny indostria, ankoatry ny zavatra hafa.